သက်ကြီးရွယ်အိုများဘာကြောင့် မကြာခဏချော်လဲရသလဲ - Hello Sayarwon
Update Date နိုဝင်ဘာ 14, 2019 .2mins read
လူကြီးများချော်လဲလျှင် အသက်ကြီးသောကြောင့် ၊သတိမမူသောကြောင့်ချော်လဲခြင်းဖြစ်သည်ဟုအလွယ်မမှတ်ယူသင့်ပေ။ သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင် မကြာခဏချော်လဲခြင်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြသနာများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ အန္တရာယ်ကင်းပြီးလုံခြုံမှုရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်မျိုး မဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းစသည့် အကြောင်းရင်းများနှင့် ဆက်စပ်နေနိုင်သည်။
ချော်လဲခြင်းသည် မတော်တဆဖြစ်ခြင်းကြောင့် အမြဲမဟုတ် ပါ။ တဦးချင်းစီနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်မူတည်ပြီးချော်လဲစေနိုင်သောအကြောင်းရင်းများရှိပါသည်။ ထိုအကြောင်းရင်းများနှင့် ထိတွေ့ရလေလေချော်လဲနိုင်ချေများလေလေဖြစ်သည်။
လူကြီးများ မှီဝဲနေရသော အချို့ဆေးများသည် မူးခြင်း၊ ဝေခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
လဲလျောင်းနေရာမှ ရုတ်တရက်ထထိုင်ချိန်တွင် သွေးပေါင်ကျခြင်းသည် အနေအထားကြောင့်သွေးပေါင်ကျခြင်းဖြစ်ပြီးချော်လဲစေတတ်သည်။
• လမ်းလျှောက်ရန်နှင့် ဟန်ချက်ထိန်းရန်ခက်ခြင်း
၎င်းသည် လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခြင်း၊ ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောရောဂါများ၊ အဆစ်ရောင်ခြင်းနှင့် အချို့သောဆေးများ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကြောင့်ဖြစ်ရသည်။
အရာဝတ္ထုများကိုကောင်းစွာမမြင်ရခြင်းေကြောင့် ချော်လဲရသည်။ အတိမ်အနက်မခန့်မှန်းနိုင်ခြင်း၊ ရေတိမ်နှင့် အတွင်းတိမ်စွဲခြင်းစသည့် အမြင်အာရုံနှင့်ဆိုင်သောရောဂါများကြောင့်လဲဖြစ်နိုင်သည်။
• ကြွက်သားအားနည်းခြင်း(အထူးသဖြင့် ခန္ဒါကိုယ်အောက်ပိုင်းကြွက်သားများ)
ကြွက်သားများအားနည်းလျှင် အကွေးအဆန့်ကောင်းစွာမပြုလုပ်နိုငခြင်း၊ ဟန်ချက်မထိန်းနိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်ကာချော်လဲရသည်။
• ခြေဖဝါးများနာကျင်ခြင်းနှင့် လုံခြုံမှုမရှိသော ဖိနပ်များဝတ်ဆင်ခြင်း
ကြိုးသိုင်းမပါသောဖိနပ်များ၊ ကွင်းထိုး၊ ညှပ်ဖိနပ်ပါးများနှင့် ထောက်မြင့် ဖိနပ်များ၊ အောက်ခံသားရေပါးသောဖိနပ်များကသင့် ကိုချော်လဲနိုင်ချေများစေသည်။
နေရာတိုင်းတွင်ချော်လဲနိုင်ချေရှိသော်လည်းနေ့စဉ်လှုပ်ရှားနေသော ပတ်ဝန်းကျင် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမရှိလျှင် ချော်လဲနိုင်ချေပိုများသည်။
• အထူးသဖြင့် ရေချိုးခန်းများတွင် ကြမ်းခင်းလျှောခြင်း
• ကြမ်းပြင်နှင့် လှေကားထစ်များတွင် ပစ္စည်းများရှုပ်ပွနေခြင်း
• လှေကားထစ်များကျိုးနေခြင်း၊ မညီညာခြင်း
အချုပ်ဆိုရသော် မကြာခဏချော်လဲလျှင် ဆိုးကျိုးများဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပြီး သင့်တော်သော စမ်းသပ်မှုများလုပ်ဆောင်ကာ မကြာခဏချော်မလဲစေရန် ဂရုစိုက်သင့်သည်။
Important Facts about Falls. http://www.cdc.gov/homeandrecreationalsafety/falls/adultfalls.html. Accessed2November, 2016
Falls and Older Adults. https://nihseniorhealth.gov/falls/causesandriskfactors/01.html. Accessed2November, 2016
What causes seniors to fall so frequently? http://www.theglobeandmail.com/life/health-and-fitness/ask-a-health-expert/what-causes-seniors-to-fall-so-frequently/article580083/. Accessed2November, 2016
ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း လက်ဆေး နှာချေချောင်းဆိုး mask သက်ကြီးရွယ်အို ကိုယ်ဝန်ဆောင် COVID-19
ကူးစက်ရောဂါများ, ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဇန်နဝါရီ 31, 2020 .2mins read
ကိုယ်ဝန်ဆောင် COVID-19 အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ခုခံအား သက်ကြီးရွယ်အို ကိုယ်ခံအားမကောင်း အာဟာရချို့တဲ့ သွေးအားနည်းတာ ကလေးအလှုပ်နည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် လက်ဆေး
ကူးစက်ရောဂါများ, ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဇန်နဝါရီ 29, 2020 .2mins read
ဘိုးဘိုးဘွားဘွား၊ မြေးလေးတွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ အဖော်မဲ့မှုနဲ့ အထီးကျန်မှု၊ လူမှုဆက်ဆံရေး၊ ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံ၊ ကလေးထိန်း၊ သက်ကြီးရွယ်အို
ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ အသက်ကြီးခြင်း, တက်ကြွလှုပ်ရှားစွာနေထိုင်ခြင်း ဇန်နဝါရီ 28, 2020 .2mins read
စိတ်ကျဝေဒနာ လူကြီးမိဘ သက်ကြီးရွယ်အို မိဘဘိုးဘွား အဖေ အမေ မိသားစု ကျန်းမာရေး စိတ်ကျန်းမာရေး သားသမီး ပြုစုဂရုစိုက်မှု အားပေးမှု
ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ အသက်ကြီးခြင်း, သက်ကြီးပိုင်းစိတ်ကျန်းမာရေး ဇန်နဝါရီ 28, 2020 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် အောက်တိုဘာ 9, 2020 .3mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် စက်တင်ဘာ 16, 2020 .3mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် မတ် 13, 2020 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် မတ် 12, 2020 .2mins read